Vaovao Tao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Toniziana 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2017 2:19 GMT
Nambara ny valin'ny Loka Bilaogy Toniziana, ato ny amin'ny teny Frantsay ary ato ny amin'ny teny Anglisy.
Tarek nanoratra momba ny “Hazon'ny Paradisa”, fampiratiana mozaika ao amin'ny Mozea Brooklyn any New York, izay ahitana ireo mozaika sasany avy amin'ny synagoga ao Hammam Lif, Tonizia.
Manome fomba fijery mahaliana momba ny tontolon'ireo mozaika izy ary manazava ny maha-zava-dehibe azy ireo.
Faly i Zizou mahita fa mandray anjara amin'ny famoronana boky kely ireo toeram-pivarotana lehibe ao Tonizia, mamaky ny revolisiona amin'ny alalan'ny fahazoana sy fidiran'ny olona mora kokoa amin'ny boky, ary mamarana ny fotoana izay vitsy monja ny olona tsy maintsy mankany amin'ny trano fivarotam-boky feno vovoka, miaraka amin'ny mpiasan'ny tranomboky tsy tia ho namana, mba hitady boky. Ankehitriny, tsy misy olona misalasala intsony haka boky iray na roa rehefa miantsena izy ireo.
Manoratra momba ny fijeriny i MMM fa ny ilaintsika dia tsy Islam vaovao sy maoderina, fa fahatakarana vaovao sy maoderina momba ny Islam.
Tunisian Globetrotter indray nanambara ny fanombohan'ny onjam-peo antserasera avy amin'ireo mpanohana ny ekipa baolina kitra Toniziana, Club Africain. Hitantara ny vaovao, ny hetsika sy ny lalaon'ny ekipa ny radio.
Nanamarika i Sup'Comian boy fa ny vaovao sy ny fampahalalana momba ny tontolon'ny aterineto sy ny Fifandraisan-davitra dia tombontsoa iombonana eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana ary manolo-kevitra amin'ny fananganana vondrona bilaogy mitantara ireo olana any Tonizia.
Marary sy leon'ireo mpivarotra izay nampiofanina hampitahotra ny mpanjifa sy hampandoa volabe azy ireo kosa i Tarek. Miresaka momba ny zava-niainany tamin'ny nividianany solosaina vao haingana, sy ny fomban'ilay mpivarotra tsy nitsahatra nandresy lahatra azy mba hividy fitaovana fanampiny hafa sy antoka 3 taona izy.
Manoratra lahatsoratra momba ireo vehivavy bilaogera Toniziana ho an'ny gazetiboky vehivavy Toniziana kosa i Nawarat, ary manasa ireo vehivavy bilaogera Toniziana izy mba hanampy azy amin'ny lahatsoratra amin'ny alalan'ny famaliana ireo fanontaniana vitsivitsy na soso-kevitra sasantsasany.
Manoratra momba ny fahasamihafan'ny tenim-paritra eo amin'ny vahoaka avy ao an-drenivohitra, Tunis, sy ny vahoaka avy any atsimon'i Tonizia, ary koa ireo toe-javatra mampihomehy mitranga noho ireo fahasamihafana ireo i Jrayda.